पहिलो नजर मा यो Tarot प्रेमीहरू व्यक्तिगत सम्बन्ध पक्षहरू प्रकट देखिन्छ। यो एक साधारण गल्ती शुरुआती भाग्य tellers छ। वास्तवमा, कार्ड प्रेमीहरू (Taro) एक गहिरो महत्त्व छ। त्यो - एक कल वा इन्टरसेक्ट, तपाईं दुविधा चयन गर्नुपर्छ। यसको मुख्य बिन्दु एक व्यक्ति स्थिति खोल्दै सामना छ। का कसरी lasso, विभिन्न हातमा यो व्याख्या गर्न हेरौं।
सराउन्ड कार्ड मा निहित छवि द्वारा प्रवाह जसको अर्थ। विशेषज्ञहरु अलिकति विभिन्न विद्यालय छवि परिमार्जन भनेर थाहा, तर सार एउटै रहनेछ। को Tarot प्रेमीहरू विचार गर्नुहोस्। यो एक पुरुष र महिला (आदम र हव्वाले) को आंकडा सांप को शाखा प्रलोभनको lurking जहाँ स्याउको रूख, अर्को देखाउँछ। लगभग बाइबलीय कथा। छवि आगामी चुनाव मा प्रतिबिम्ब प्रोत्साहन दिन्छ। पापको मिठास, वा ऋण खुलारूपमा: व्यक्तित्व थप महत्त्वपूर्ण छ के निर्णय गर्न निमन्त्रणा छ। यो एक lasso को सार छ। उहाँले यो प्राप्त गर्न असम्भव छ जसको द्वारा बिभाजनमा, बताइएको छ। तपाईं धेरै परस्पर विशेष विकल्प चयन गर्न आवश्यक छ। जानिन्छ, Arkanov Taro को मूल्य बहुमुखी। तसर्थ, आगामी चुनाव को सार छिमेकी कार्ड न्याय गर्न हुनेछ। तस्विर दूत पखेटा मा महिला। धैर्य को पाठ - तिनीहरूले के अगाडि निहित कुरा। केही आकस्मिक कदम मा ट्रिगर हुनेछ। यी कारणहरूले पनि बुझ्न र हटाउन आवश्यक छ।
प्रेम खुलापन साझेदार आवश्यक छ। आवश्यक जो कोहीले देखेको र यसलाई के को लागि सम्मान गर्न। Tarot प्रेमीहरू आंतरिक यो गहिरो भावना ठ्याक्कै पहुंचाता। एक व्यक्ति निष्कपट छ, त्यो अरूको विकल्प आदर जिम्मेवारी दिन गर्दैन अप। र एउटै प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा छ। कार्ड को अर्थ decipher गर्न पारिवारिक सम्बन्ध अर्थ आधारित हुनुपर्छ। प्रेम - मात्र एक ठूलो आनन्द, तर पनि बलिदान हो। यो zagadannoy मा Tarot कार्ड प्रेमीहरूको संकेत क्षेत्र त्याग्न आवश्यकता छ। यो मान, पाठ्यक्रम, समस्या संग व्यवहार गर्नुभयो विवादहरू आधारमा फरक हुन्छ। तर यो सधैं व्यक्तिगत को परिवर्तन संग सम्बन्धित तनाव छ। केही अनावश्यक मर्न छ। नयाँ कम मूल्यवान, तर हालसम्म अज्ञात छैन, त्यसको ठाउँमा देखा पर्नेछ। एक मानिस विकास सीमा मा खडा र पहिलो कदम डर छ। यसबाहेक, क्षेत्रको कुनै पनि ढाकिएको छैन। जो बाटो जाने निर्णय गर्न आवश्यक गर्न गाद। प्रेमीहरूको Tarot मात्र आगामी चुनाव बारे बोल्छ, र यो गर्न सक्दैन गर्न। हामी आफूलाई लागि विचार गर्नुपर्छ। ज्योतिष मा मिथुन को साइन lasso पारस्परिक रहेको छ। यो duality, लगातार शङ्का। व्यक्तित्व, यो सङ्केत, मोबाइल, लचिलो, मिलनसार, तर हावा। उनको सजिलो संग कुरा गर्न, तर यो प्राप्त गरेको केही कठिन छ।
दिन को नक्शा (अगाडी स्थिति)
युवा अपरिपक्व मान्छे संग कुराकानी हुनेछ। तिनीहरूले मिश्रित भावना पैदा। एक हात मा, आफ्नो चाल सौम्य, nonaggressive, कहिलेकाहीं हास्यास्पद। अन्य मा, म आफ्नो समय बर्बाद भएको लागि wretch गाली गर्न चाहन्छु। दिन रहस्यमय प्रेमीहरू (Tarot) प्रतीकको रूपमा, मान जो - विकल्प ठ्याक्कै व्याख्या गर्नुपर्छ छ। एक निर्णय गर्ने। यो सम्भवत साँचो हो। सोझो मानिसको स्थिति मा फांसी दिन सकारात्मक मानिन्छ। बस भविष्यमा दिन देख किनभने। यो जटिल छ, तर साँझ तपाईं समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता मा सुखद थकान र गर्व आशा। मान्छे मायालु, यो कार्ड प्रलोभनको heralds। शायद, कसैले साझेदार चासो हुनेछ। निस्सन्देह, यो अप्रिय छ। तर यो मूल्य किनभने क्षणिक flirtation को स्नायु प्राप्त छ। Arkan को खुलापन र निष्कपटता बारेमा भन्छन् कि सम्झना। विश्वास - यो साँचो प्रेम भाग हो।
दिन (उल्टो स्थिति) को नक्सा
यो खराब portent छ। यस्तो अवस्थामा प्रेमीहरू Tarot कार्डमा नकारात्मक मान छ। तपाईं गम्भीर, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संलग्न हुँदैन। rashly केही solves। Arkan गल्ती विरुद्ध चेतावनी दिन्छ। सही सडक जानकारी, बुद्धि को कमी, हेरविचार उल्टाउन भन्छन्। साथै, व्यक्ति अहिलेसम्म आफ्नै भाग्य व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त परिपक्व छ। तपाईं घट्दैछ एक बाटो छोडेर, वरिष्ठ परामर्श वा आकस्मिक कार्य जोगिन आवश्यक छ। अझ mundane अर्थमा फांसी दिन काम मा आफ्नो सहकर्मीसँग सानातिना समस्याहरूको देखाउँछ। गफ राम्रो प्रत्येक अन्य बुझ्न रोक्नुहोस्। वित्तीय क्षेत्र मा सफलता आशा छैन। पहिले यो भुक्तानी गर्न हुनेछ, गलत कदम गरे। को सरसृप विशिष्ट प्रश्न थियो भने, यो जवाफ अझै छ। कार्यान्वयन को Likelihood सानो चाहनुहुन्छ। सायद, व्यक्ति यसको कार्यान्वयन लागि मंच तयार गर्न असमर्थ छ।
Tarot। Guessing: शेष सम्बन्ध मा प्रेमीहरू
पहिलो, सीधा-अगाडि स्थिति विचार गर्नुहोस्। यो परिदृश्य मा उपस्थिति, को lasso सम्बन्ध बस विकास गर्न सुरु गर्दा मात्र अनुकूल छ। यो साझेदार को सही विकल्प को एक चिन्ह हो। कप को Deuce संयोजनमा जीवनको लागि साझेदार प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यहाँ एक विवाह हुनेछ भने प्रत्यक्ष सूर्य वा महारानी को एक नम्बर, त्यसैले। Arkanov Taro मूल्य मात्र सापेक्षिक अभिमुखीकरण सरसृप मा निर्भर गर्दछ, तर पङ्क्तिबद्ध मा विशेष स्थिति। पछिल्लो प्रेमीहरू मा गरिएको छ कि विकल्प कुरा। उहाँले अझै पनि मनोवृत्ति असर। शायद पछिल्लो प्रेम याद गर्न साझेदार। तर यी विचार फरक थिएन। भविष्यमा, अनुभव जोडे लागि हाम्रो lasso प्रतिकूल मा। यसलाई विश्वासघात को एक चिन्ह वा त्यस्तो को सम्भावना छ। एक कठिन विकल्प, कार्ड Sweethearts (Taro) भन्छन्। को टावर वा फाँसी मानिस यसलाई संयोजन गर्ने सरसृप लागि विशेष प्रतिकूल छ। यो कि तोड्न हृदयमा खुला घाउ छोड्न हुनेछ। पासोमा नपर्नुहोस् "वास्तविक" स्थिति थियो भने, अहिले शोकमा भइरहेको छ। यो बारेमा कुनै प्रश्न अझै संदिग्ध गर्न सक्दैन। तर त्यहाँ धेरै फरक चासो साझेदार भएको छ।
यस मामला मा, नक्सा सबै नकारात्मक गलत निर्णय देखाउँछ। यो पनि उत्कृष्ट संभावनाहरु सकारात्मक arcana परिवर्तन। पुरानो गल्ती लागि जिम्मेवार हुनेछ। विगत देखि समाधान गर्न समस्या आउन सरसृप छन् शक्ति न त न त इच्छा न त क्षमता छ। शायद साझेदार तपाईँको जडान regretted। यो थियो जो एक फिर्ता खींचती। तरवार तलमाथि को तीन संग संयोजन - कुनै आशा छोड्छ। यदि त्यहाँ फाँसी, त्यसपछि उहाँले वर्तमान सम्बन्ध बाट भाग्य-पारंगत गर्न, रूपमा पछि कडुवाहट पछुताउनु मना गर्यो। जब वर्तमान परिदृश्य मा, Pentacles धेरै एक भंग mercantile कारण हुनेछ भन्ने हो। तर वास्तवमा यो परिवर्तन गर्दैन। तपाईं ग्रस्त र आफ्नो कार्यहरू बारे पछुताउनु छ। थप विवरण बाहिर सम्बन्ध को संभावनाहरु को Tarot "पिरामिड प्रेमीहरू" मा अनुमान गर्न मद्दत गर्नेछ बनाउन। पङ्क्तिबद्ध एकदम सरल छ। यसलाई चार कार्ड संलग्न। का थप विवरण मा हेरौं।
हामी आफैलाई आफ्नो तस्वीर प्रसार, डेक फेरबदल र चार lasso पुल गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई के विपरीत, सम्बन्ध को संभावनाहरु, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि समस्या, र त्यो हो, एक्स समेकन योगदान निर्धारण। स्थिति को मूल्य:
गाद। स्थिति, आन्तरिक स्थिति आफ्नो मनोवृत्ति।
साझेदार। उहाँले तपाईंलाई बारेमा सोच्छ के आफ्नो विचार र भावना।
सम्बन्ध: मान्छे बीच जे।
भविष्यमा: सम्बन्ध को संभावनाहरु बारेमा बोल्दै।
हाम्रो फांसी दिन पहिलो स्थिति देखा भने, यो एक व्यक्ति आफूलाई पक्का छैन भन्ने हो। उहाँले अयोग्य साझेदार, शङ्का, दुःख ठान्नुहुन्छ। राम्रो साइन छैन - प्रेम को उपस्थिति को दोस्रो स्थितिमा। हालसम्म, सम्बन्ध काम बाहिर छैन। तिनीहरू छैन, बलियो क्षणिक हावा। चौथो स्थिति महारानी, Hierophant, विश्व भने, त्यसपछि सबै एक लामो संघ समाप्त हुनेछ।
व्यापार संसारमा मा प्रभाव
यस मामला मा एक lasso को उद्भव, फरक अर्डर परिवर्तनहरू भन्छन्। यस अगाडि स्थिति, यो व्यापार वार्ता, नयाँ परियोजनाहरू तथा सम्पर्क portends। यो प्रस्ताव सोच्न आवश्यक राम्रो हुनेछ। तिनीहरूले होनहार हुन, तर यो दिन केही द्वारा आवश्यक छ गर्नेछ। उदाहरणका लागि, सेवाको ठाउँ परिवर्तन गर्न। नयाँ मा, सबै छैन एकैचोटि पूर्ण विकास हुनेछ। तर सरसृप मा सेना पर्याप्त सफल। को उल्टो स्थिति मा फांसी दिन अत्यधिक खर्च र खाली आशा विरुद्ध चेतावनी दिन्छ। कार्ड सबैभन्दा सकारात्मक स्वभाव पनि बिगार्छ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेमीहरूको (Tarot) कुनै पनि स्थितिमा ऊर्जा अभाव भविष्यवाणी। कुनै संभावनाहरु। मानिस भाग्य द्वारा प्रस्तावित संभावना महसुस गर्न सकिएन, व्यर्थमा प्रतिभा squandered। म सुरुदेखि सबै तरिका बारम्बार छ। को टावर को संयोजन आय वा स्थान को हानि भन्छन्। तपाईं नयाँ काम चाँडै पाउन। फाँसी मानिस संग - आफ्नै दोष मार्फत प्रतिकूल लगानी, ठूलो घाटा भविष्यवाणी गर्छ। तरवार तीन संग उल्टो होसियार हुन प्रदान गर्दछ। दुर्घटनामा को likelihood।
यस मामला मा, नकारात्मक lasso छैन त ठूलो छ। उहाँले उपचार, अस्पताल, स्पा र यति मा एक परिचित विकल्प छ। शीघ्र हस्तक्षेप तरवार को ऐस हाम्रो lasso को संयोजन भन्छन्। दुवै कार्डहरू सोझो मानिसको स्थिति भने, त्यसपछि शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप पूर्ण रिकभरी नेतृत्व हुनेछ। हामी यो गर्न सहमत हुनुपर्छ। जब दुवै कार्डहरू भन्दा गरिएका छन्, त्रुटिहरू को उच्च जोखिम। निर्णय संग हतार छैन। दबाइ वा अन्य उपचार को राम्रो प्रयोग। अर्को चन्द्र भने, कृपया राष्ट्रिय प्रक्रियाहरु बुझाउँछ। तिनीहरूले अनुकूल सर्जन को स्केलपेल। प्रायजसो मा, परिदृश्य मा प्रेमीहरूको को स्वास्थ्य आहार संग शारीरिक शिक्षा संयोजन गर्ने प्रस्ताव राखे। उपचार वा रोकथाम गर्न एक दोहरी दृष्टिकोण आवश्यक छ।
यस अवस्थामा, को इच्छा
राम्रो सपना को बोध मा अडकलहरु गर्दा, हाम्रो फांसी दिन हेर्न दुःखी। यो एक अनुकूल वातावरण संग त्यसपछि मात्र "विगतका" स्थिति राम्रो छ, र। त्यहाँ Hierophant, वा तारा विश्व भने, त्यसपछि त्यहाँ आशा छ, तर हामी प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्न आवश्यक छ। अन्य अवस्थामा, जवाफ कुनै छ। नक्सा शायद गाद एक इच्छा पूरा पचाउन पर्याप्त बलियो मा महसुस छैन। यो खराब साइन छ। यो खेती गर्न आवश्यक छ। तपाईं देख्न, आफ्नै दोष मार्फत अक्सर रहस्यमय शो घाटा। तपाईं के चाहनुहुन्छ, यो हात मा नजिक छ, तर यो महत्त्वपूर्ण कुरा को कमी द्वारा hampered उठाउनु। कुनै एक मद्दत गर्नेछ। आफैलाई आफैलाई परिवर्तन खुसी र सफल हुन, छ!
Numerology संग कार्ड को व्याख्या
भारतीय Numerology - भविष्यमा एक विश्वसनीय भविष्यवाणी?
Alister Krouli: "Thoth Tarot"। "Thoth को पुस्तक" ए क्रोली
Gluck जीवनी र संक्षिप्त haratkeristika रचनाकार
एउटा देश जुन समुद्रमा पहुँच छैन। ती देशहरू जहाँ समुद्रमा पुग्दैनन्
Sergey Sholokhov: फिलिम आलोचक गरेर चलचित्र।
"द Witcher 3" हतियार कोटा स्कूल: उपकरण विवरण र सिफारिसहरू
स्वेटर पुरुष spokes: फेब्रुअरी 23 वा जन्मदिन आफ्नो प्रिय लागि एक अद्वितीय उपहार बनाउन
बच्चाहरु संग नागरिक गर्न राज्य लाभ। संघीय व्यवस्था № 19.05.1995, को को 81-FZ
दबाइ "Buserelin-लामो": अनुप्रयोगको सुविधाहरू
बाख्रा गरेको दूध एलर्जी - एक अपरिहार्य र उपयोगी उत्पादन